Kutheni umntwana wam ofikisayo engafuni ukuhlamba? | Oomama Namhlanje
Kutheni umntwana wam ofikisayo engafuni ukuhlamba?
UAlicia tomero | 03/06/2021 10:00 | Iingcebiso, Unonophelo, Intsapho, ZeMpilo
Ingabonakala njenge-anecdotal, kodwa abazali abaninzi bayayibona kwinqanaba lokufikisa ingxaki yokungafuni ukuhlamba. Kwenzeka ikakhulu kwinqanaba ukusuka kwiminyaka eli-11 ukuya kweli-13 ubudala, xa bedlula kweso sigaba. Banokuphepha ukuzilungisa ngenxa yezizathu ezahlukeneyo, nangona sinokufumana iindlela zokuba bakuqonde oko kuya kufuneka ulandele ucoceko lomntu.
Sinokuqonda ukuba abantwana bethu ngaphambi kokufikisa banenye indlela yokukhathalela ukucoceka kwabo, kuba bengaqondanga babezinyaswe ngakumbi ngabazali ukwenza olu hlobo lomsebenzi. Kodwa kwenzeka ntoni ngoku?
1 Kutheni umntwana wam ofikisayo engafuni ukuhlamba?
1.1 Zininzi izinto eziphazamisayo
1.2 Gcina iliso kwimpilo yabo yengqondo
2 Thetha nomntwana wakho malunga nococeko lwabo
Siyazi ukuba unyana okanye intombi yethu ihamba ngeli nqanaba lotshintsho, ukufikisa. Baqala ukufumana utshintsho lwabo emzimbeni ngendlela yabo, amantombazana aqala ngokuya exesheni kunye namadoda ngokutshintsha kwelizwi. Olu tshintsho lumenza abonakalise ukuba neentloni ngakumbi kwaye ngenxa yoko Imvukelo ibonakala kwezinye iimeko. Ukuba sibanikeza ukuba kufuneka bahlambe indlela yabo yokucela umngeni kuthi kunokuba ngu "hayi".
Fumana izizathu zokuba kutheni umntwana wakho okwishumi elivisayo engafuni ukuhlamba. Akukho namnye olunge ngaphezu komzali ngokwakhe ukufumanisa izizathu, ngaba ucinga ukuba oko kunokuba ngumnxeba wokuvuka? Olunye ulutsha luyazi ukuba kufuneka lususe elo vumba libi kunye nokungcola emzimbeni, kwaye balindele ukuthathelwa ingqalelo. banike abo bavusa umnxeba.
Zininzi izinto eziphazamisayo
Ekuqaleni kokufikisa ungadala mininzi kakhulu imisebenzi noxanduva ezenza inqanaba lomsebenzi omninzi wengqondo: umsebenzi wesikolo, ukuzibophelela nabahlobo, uxanduva ekhaya ... konke oku kwenza ucoceko babe yinto yokugqibela ekufuneka beyicingile kwaye uninzi lwemisebenzi lushiyelwe usuku olulandelayo.
Gcina iliso kwimpilo yabo yengqondo
Oku kunokuba yinto enzulu ngakumbi kunesiphazamiso. Kweli nqanaba linzima banokuhamba nge imeko yoxinzelelo ngenxa yayo yonke into equka imeko-bume yabo. Ukuba kukho imiqondiso yokuba oku kunokuba sisiphumo, zama ukugxininisa ukuba ngaba ukhathazekile malunga notshintsho olwenzeka emzimbeni, esikolweni, kubahlobo, okanye kuyo yonke into ngokubanzi.
Ingakhokelela kwi ungabinamnqweno wokukhathalela umzimba wakho, Akanomdla kwimpahla okanye ukutshintsha yonke imihla ibe yingubo ecocekileyo, akazinanzi iinwele kunye nokubonakala kwakhe, akafuni ukuhlamba, akanikeli ukubaluleka kwezinto zemihla ngemihla, ulala kakubi. Yonke into iyafana nokwenzeka okomzuzwana wokuzithemba okuphantsi kwaye kufuneka ulumkele ukufumanisa ukuba impilo yakho yengqondo ilungile.
Thetha nomntwana wakho malunga nococeko lwabo
Kuhlala kuxelwa ukuba uthando nomsa onokuwudlulisa Unyana wakho ngumlinganiso wokuqala onokukwazi misela incoko ngeyona milinganiselo ilungileyo. Thetha nonyana wakho kwaye uthethe ngotshintsho olwenzekileyo ebusheni bakhe, ngoku zininzi iinwele zomzimba kunye nokubila okukhulayo. Ngenxa yoko, kufuneka bakhuthazwe ukuba bazilungise kakuhle yonke imihla ukuze bazive bebhetele ebusweni babanye.
Abazali kufuneka baphindaphinde ngomzekelo kwaye kufuneka babonise nemikhwa yabo yezempilo. Unokukhuthazwa ukuba uhlambe kunye neereferensi ezilungileyo, ungabeka ingxelo yokuba ishawa okanye ibhafu iyasinceda siziva sitsha emva kokuyisebenzisa, kwaye iyayiphumuza kwaye iyile ulwaneliseko lokuziva ucocekile kwaye umhle. Kuyafana nokusenza sibonakale silungile kwaye siphakamise ukuzithemba kwethu.
Phinda ucoceko lwakho lwemihla ngemihla njengomsebenzi omnye, mqinisekise ukuba ngaphambi kwesidlo sangokuhlwa okanye ixesha lakhe lokuzonwabisa kunye neselfowuni okanye itekhnoloji, kufuneka ahlambe, mhlawumbi yile ndlela ukongeza ngakumbi ukukhuthaza kwakho.
Usenokugxininisa ngakumbi kwinkuthazo yabo. Amakhwenkwe namantombazana bathanda ukuzama izinto ezintsha. Ungazivelisa ngeemveliso ezintsha zebhafu, kunye neemveliso ezingazange zisetyenziswe ngaphambili kwaye abazithandayo, okanye ngeziqholo ezingaqhelekanga ezitsala umdla wabo. Naliphi na ingcebiso inokuba sisithethe sokwenza imikhwa yakho elungileyo.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Oomama Namhlanje » Unonophelo » Kutheni umntwana wam ofikisayo engafuni ukuhlamba?
Unyana wam okwishumi elivisayo ukhetha utata wakhe
Kutheni abantwana bam bephelelwe lithemba